Fanamby sy fanararaotana amin'ny raharaham-barotra miaraka amin'ny valanaretina COVID-19 | Martech Zone
Nandritra ny taona maro dia niarahaba aho fa ny fanovana no hany tsy tapaka fa tokony hahazo aina ireo mpivarotra. Ny fiovan'ny teknolojia, ny salantsalany ary ny fantsona fanampiny dia ny fikambanana terena rehetra hanaraka ny fitakian'ny mpanjifa sy ny orinasa.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia noterena ihany koa ny orinasa hahay mangarahara kokoa sy ho olombelona amin'ny ezaka ataon'izy ireo. Ny mpanjifa sy ny orinasa dia nanomboka nanao orinasa hifanaraka amin'ny finoany filantropika sy etika. Raha teo no nanasarahan'ny fikambanana ny fototr'izy ireo tamin'ny asany, ankehitriny ny antenaina dia ny fanatsarana ny fiaraha-monina misy antsika ary koa ny fikolokoloana ny tontolo iainana.
Saingy ny areti-mandringana sy ny fanidiana mifandraika amin'izany dia nanery ny fanovana tsy nampoizina izay tsy nampoizinay mihitsy. Ireo mpanjifa izay saro-kenatra hampiasa e-varotra indray dia nirohotra nankao. Najanona ny toeram-piaraha-monina toa ny toeram-pivarotana hetsika, trano fisakafoanana ary sinema sarimihetsika - maro no voatery nakatona tanteraka.
Fanaparitahana orinasa COVID-19
Misy indostria vitsivitsy izay tsy voakorontana amin'izao fotoana izao noho ny areti-mandringana, ny halaviran'ny fiaraha-monina ary ny fiovan'ny toetran'ny mpanjifa sy ny orinasa. Izaho manokana dia nahita maso fiovana goavana niaraka tamin'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa tamiko:
Ny mpiara-miasa amin'ny indostrian'ny vy dia nahita trano fandraisam-bahiny sy trano fanatobiana entana sy trano fivarotana ecommerce no nitondra ny fitomboan'ny filaharany.
Ny mpiara-miasa iray amin'ny sehatry ny sekoly dia tsy maintsy nitondra ny varotra rehetra tany amin'ny mpanjifa rehefa nifindra tamin'ny Internet ny sekoly.
Ny mpiara-miasa amin'ny indostrian'ny varotra trano dia tsy maintsy niady hamolavola ny habaka mba hahamety kokoa ny fandaharam-potoana malefaka, izay andraisan'ny mpiasa miasa an-trano azy izao.
Mpiara-miasa marobe amin'ny sehatry ny trano fisakafoanana no nanidy ny efitrano fisakafoanan'izy ireo ary nifindra tamin'ny fivarotana sy ny fandefasana entana ihany.
Ny mpiara-miasa iray dia tsy maintsy nanamboatra endrika spa ho an'ny mpitsidika tokana ary tsy misy afa-tsy amin'ny varavarankely fanadiovana no misy eo anelanelan'ny mpanjifa. Namolavola vahaolana ecommerce sy fandaharam-potoana feno izahay ary nanomboka ny varotra mivantana, ny mailaka marketing ary ny paikady fikarohana eo an-toerana - zavatra tsy nilainy mihitsy talohan'izay satria nanana bizina am-bava be izy.
Mpiara-miasa iray amin'ny indostrian'ny fanatsarana trano no nijery ny fiakaran'ny vidin'ireo mpamatsy sy ny mpiasa mitaky karama bebe kokoa satria ny fangatahana fanatsarana ny trano (toerana onenanay ankehitriny ary asa) dia ampanjifaina be ao.
Na ny masoivohoko vaovao aza dia tsy maintsy nanavao tanteraka ny varotra sy ny varotra. Tamin'ny taon-dasa, niasa mafy izahay tamin'ny fanampiana ireo orinasa tamin'ny fanovana nomerika ny zavatra niainan'ny mpanjifany. Amin'ity taona ity, ny automatisie anatiny, ny fahombiazany ary ny fahamendrehan'ny data dia mampihena ny enta-mavesatra amin'ireo mpiasa mbola tsy noroahina.
Ity infographic avy amin'ny finday360, mpamatsy SMS mora vidy ho an'ny orinasa madinidinika sy lehibe ary antsipirihany momba ny fiantraikan'ny areti-mandringana sy ny fanidiana amin'ny fanombohana, ny fandraharahana ary ny orinasa amin'ny antsipirihany.
Fiantraikany ara-toekarena ratsy an'ny COVID-19
Maherin'ny 70% ny fanombohana no tsy maintsy namarana ny fifanarahan'ny mpiasa maharitra hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana.
Maherin'ny 40% ny fanombohana dia manana vola ampy mandritra ny iray na telo volana iasana.
Ny GDP dia nifanena 5.2% tamin'ny taona 2020, ka nahatonga azy io ho ny fitotonganan'ny tany manerantany tato anatin'ny folo taona.
Ny tombontsoan'ny orinasa COVID-19
Na dia ory lehibe aza ny orinasa maro dia misy ny fotoana mety. Tsy natao hanamaivana ny valanaretina izany - izay mahatsiravina tanteraka. Na izany aza, tsy afaka manipy servieta fotsiny ny orinasa. Ireo fanovana lehibe teo amin'ny tontolon'ny asa ireo dia tsy nahamaina ny fangatahana rehetra - fotsiny fa ny orinasa dia tokony hivadika ho velona.
Ny orinasa sasany dia mahita fotoana mety amin'ny fanovana ny fomba fiasan'izy ireo:
Fananganana modely fiantrana hanomezana kojakoja ilaina sy tombony ho an'ireo mila izany.
Fihetsiketsehana manararaotra ny mponina miasa ao an-trano izay mila fanaterana sakafo sy kojakoja.
Ny marketing amin'ny pivoting dia hampiova ny tinady amin'ny fitsidihana fivarotana antsinjarany amin'ny fitsidihana nomerika miaraka amin'ny fandaharam-potoana amin'ny Internet, ny ecommerce ary ny safidy fandefasana.
Fanamboarana pivoting mba hanomezana kojakoja ara-pahasalamana sy fitaovana arovana manokana.
Manova ny sehatr'asa misokatra amin'ny habaka miaraka amina faritra azo antoka sy tsy mitokana, hampihenana ny fifandraisana ara-tsosialy.
Ny fahafantarana ny fomba hamaliana ny toe-javatra dia hahafahan'ny orinasanao mivezivezy amin'ity areti-mandringana ity. Mba hanombohana anao, ny torolàlana etsy ambany dia hiresaka momba ireo fanamby hatrehanao na mety efa natrehinao ary ireo fotoana tokony hoheverinao fa raisinao.
Fandraharahana eo afovoan'ny COVID-19: fanamby sy fahafaha-manao
Dingana 6 hametrahana ny orinasanao
Ny orinasa dia tsy maintsy mampifanaraka sy mandray, raha tsy izany dia ajanona any aoriana. Tsy hiverina amin'ny asany talohan'ny taona 2020 intsony izahay satria niova mandrakizay ny orinasan-tsokosoko sy ny fitondran-tena. Ireto misy dingana 6 izay atolotry ny Mobile360 hanampy anao hamantatra izay azon'ny ekipanao atao alohan'ny fanao ankehitriny:
Fikarohana ilain'ny mpanjifa - misitrika lalina ao amin'ny tobin'ny mpanjifanao. Miresaha amin'ireo mpanjifanao tsara indrindra ary andefaso ny fanadihadianay hahafantarana ny fomba hanampianao tsara ny mpanjifanao.
Manangana mpiasa mora miovaova - Ny outsourcing sy ny mpifanaraka dia mety ho fotoana mety indrindra hampihenana ny fangatahana karama izay mety hisy fiatraikany amin'ny fikorianan'ny volan'ny orinasanao.
Sariho ny rojom-bidinao - Diniho ny fetran'ny lozisialy atrehin'ny orinasanao. Ahoana ny fomba kasainao hitantanana sy hiasa manodidina ny fiantraikany?
Mamorona sanda zara - Ankoatra ny tolotrao dia ampitao ny fiovana tsara entin'ny fikambanana misy ny fiarahamoniny ary koa ny mpanjifanao.
Mijanona mangarahara - raiso ny paikadim-pifandraisana mazava sy be fanantenana izay manome antoka ny olona rehetra any ambony, any ambany, ary ao amin'ny fikambanananao mahatakatra ny toetran'ny orinasanao.
Hafanàm-po an Transformation - Ampitomboy ny fampiasam-bolanao amin'ny sehatra nomerika, mandeha ho azy, fampidirana ary analytics mba hanatsarana ny asanao. Ny fahombiazan'ny anatiny amin'ny alàlan'ny traikefan'ny mpanjifa dia afaka manampy anao handresy ary hampitombo ny tombom-barotra aza rehefa manova ny fitondran-tenany ny orinasa sy ny mpanjifa.
Tags: raharaham-barotraCovid-19harin-karena faobeSary torohaylockdownstatistikan'ny fanidianafinday360areti-mifindraantontan'isa momba ny areti-mandringanaSMS